“Aad baan u naxay markaan arkay Ronaldo” – Andy Cole – Gool FM
(Yurub) 16 Juun 2020. Halyeeyga horyaalka Premier League iyo kooxda Manchester United ee Andy Cole ayaa shaaca ka qaaday dareenkiisa markii ugu horeysay ee uu arko weeraryahankii hore ee reer Brazil de Lima Ronaldo, isagoo tilmaamay inuu aad u baqay wakhtigaas.
Andy Cole ayaa u soo ciyaaray kooxda Manchester United siddeed xilli ciyaareed, wuxuuna u dhaliyey 121 gool, waana mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican taariikhda horyaalka Premier League, inkastoo uu qitay inuu ka baqay Ronaldo markii ay ku kulmeen kulankii dhex maray kooxaha Red Devils iyo Inter Milan ee ka dhacay garoonka Giuseppe Meazza sanadkii 1999.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay weraryahankii hore kooxda Man United ee Andy Cole, wuxuuna yiri:
“Waxaan xasuustaa markii aan la ciyaarnay Inter Milan, waxaan ku jirnay tunnel-ka garoonka, waxaana arkay Ronaldo, been ma sheegayo, waxaan ku dhawaaday inaan isku kaadiyo”.
“Waa hal abuure dhab ah, kulankaas waxaan ogaaday inuu waalan yahay, wuxuu ka yimid adduun kale”.
Intaas kaddib Andy Cole ayaa xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo uu la mid yahay halyeyga reer Brazil ee de Lima Ronaldo, wuxuuna yiri:
“Markii aan kala hadlayo Ronaldo carruurtayda, waxay ii arkaan sida inaan leeyahay seddex madax”. Taasoo uu kala jeedo ineysan rumeysneyn.
“Haddii uusan la kulmi laheyn dhaawacyada soo gaaray, wuxuu ku guuleysan lahaa abaal marinta Ballon d’Or sanad kasta”.
“Wuxuu madax xanuun dhab ah ku ridi jiray kuwa ka soo horjeedda, dabcan waxaan dhihi karnaa inuu Cristiano Ronaldo la mid yahay de Lima Ronaldo”.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Barcelona iyo Leganes ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay